चीनसँग रेलवे सम्झौता हुँदै, पारवहन तथा यातायातको प्रोटोकल अर्को महिना टुंगिने -
५ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित सबैजसो राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र प्रख्यात स्नायू शल्यचिकित्सिक डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन परेको छ । पत्रपत्रिकाहरुले विविध शीर्षक दिएर यी विषयमाथि खबर लेखेका छन् ।
‘रहेनन् डा. देवकोटा’ शीर्षक दिएर पहिलो पृष्ठमा डा. देवकोटाको निधनसम्बन्धी खबर छापेको कान्तिपुरले चीन भ्रमणका क्रममा रेलवे, पुनर्निर्माण र ऊर्जामा सम्झौता हुने भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
नयाँ पत्रिकाले भ्रमणका क्रममा ऊर्जा सहकार्य र रेलमार्ग निर्माणको महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभाका ५९ सांसद्को कार्यकाल तय गरिएकोलाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले आज नछुटाइकन छापेका छन् । यद्यपि, यो खबरले पहिलो पृष्ठमा भन्दा पनि भित्री पृष्ठमा ठाउँ पाएका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभाका ५९ सांसदको कार्यकाल गोलाप्रथाद्वारा २, ४ र ६ वर्ष तय गरिएको थियो ।
यसका अतिरिक्त २५ वर्षपछि जापानसँग हवाई सम्झौता पुनरावलोकन भएको, कृषि मन्त्रीले पाउडर दूधको आयात बन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको लगायत समाचारले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै स्थान र महत्त्व पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा सहकार्य र रेलमार्ग निर्माणको महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ ।
यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकोल भने अर्को महिना टुंगिने भएको छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिकाले प्रोटोकल टुंग्याउन अर्को महिना बैठक डाक्ने सहमति भ्रमणका क्रममा हुने लेखेको छ । नेपाल र चीनले जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा यो विषय समावेश गर्ने तयारी छ ।
Tue-Jun-2018, 02:18 am मा प्रकाशित, 293 जनाले हेर्नुभयो
अस्ताए डा.देवकोटा, को हुन् उनी ?उपचार कक्षमा सोमबार साँझ पाँच बजेर पैंतिस मिनेटमा निधन